Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/manaikitra.mg.av
Proverbes : manaikitra
Proverbe Aza manaiki-dany roa, toa dinta. [Houlder 1895 #355, Rinara 1974 #480, Cousins 1871 #406]
Manaiki-dany roa hoatry ny dinta. [Veyrières 1913 #719]
Manaiki-dany roa ohatra ny dinta. [Rinara 1974]
Tsy mety raha manaiki-dany roa ohatra ny dinta. [Rinara 1974]
Proverbe Manao ohatra ny hao, ka izy lolohavina indray no hanaikitra. [Cousins 1871]
Proverbe Voalavo manaiki-by, ka ny tsy laitra hanina no hanihaniny. [Veyrières 1913 #2125]
Voalavo manaiki-by ka ny tsy laitran' ny nify no vazivazina. [Rajemisa 1985]
Voalavo manaiki-by ka ny tsy laitry ny nify no hanihanina. [Abinal 1888 #843]
Voalavo manaiki-by, ka ny tsy laitry ny nify no vazivazina. [Veyrières 1913 #6333]
Voalavo nanaiki-by : ny tsy laitry ny nify avy no inanina. [Rinara 1974 #4977]